Kutanga ndege yekune dzimwe nyika yekune dzimwe nyika kubva kuIslamabad inogara kuKabul airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Kutanga ndege yekune dzimwe nyika yekune dzimwe nyika kubva kuIslamabad inogara kuKabul airport
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutauriri wePakistan International Airlines akati mukupera kwesvondo ndege iyi yaida kutanga kuitisa mabasa ezvokutengeserana, asi yakanga iri kukurumidza kutaura kuti nhambo dzendege dziri pakati pemisoro miviri iyi dzaizoshanda kangani.
Pakistan International Airlines nendege kuenda kuKabul kubva kuIslamabad.
Izvo hazvina kujeka kuti yaive ndege yakarongwa here kana kuti charter.
Vakatenderedza vanhu makumi manomwe vakasiya Kabul vachienda kuPakistani capital mune imwe ndege yePIA.
Ndege yePakistan International Airlines kubva kuIslamabad yave ndege yekutanga yekune dzimwe nyika kumhara paKabul airport kubva pakatora maTaliban Afghanistan.
Ndege yevatakuri vePIA yakatakura vashoma chete vafambi yasvika paKabul airport nhasi, iine "vanhu vanosvika gumi ... pamwe vashandi vazhinji kupfuura vafambi," sekureva kwemumwe wevanhu vari muchikepe.
Izvo hazvina kunyatso kujeka kana iyo Pakistan International Airlines kubhururuka kwakarongerwa senge yakarongwa kutengeserana ndege kana yakasarudzika yekutengesa charter.
Mutauriri wePIA akati mukupera kwesvondo mutakuri anga akagadzirira uye achida kutangazve mabasa ezvokutengeserana, asi zvakamhanyisa kutaura kuti nendege pakati peIslamabad neKabul dzaizoshanda kangani.
Kabul airport yakakuvara zvakaipisisa panguva yemhirizhonga yekubviswa kwevanhu vanopfuura zana nemakumi maviri ezviuru yakapera nekubviswa kwemauto eUS munaAugust 120,000.
Zviteshi zvevapfuuri, mabhiriji emhepo uye zvigadzirwa zvehunyanzvi zvakakuvara zvakanyanya mumazuva mushure mekunge maTaliban apinda muKabul munaAugust 15, apo zviuru zvevanhu zvakapinda munhandare netarisiro yekutiza muguta.
VaTaliban vanga vachimhanyisa kuti nhandare iyi ishande zvakare nerubatsiro rwehunyanzvi kubva kuQatar, Turkey nedzimwe nyika.
Kutangazve kwendege dzekutengesa ichave muyedzo wakakosha weboka remagandanga, avo vakavimbisa kakawanda kubvumidza maAfghan nemagwaro akakodzera kuti vabude munyika vakasununguka.
Qatar Airways yakashanda ndege dzinoverengeka dzebvumirano kubva kuKabul svondo rapfuura, dzakatakura vazhinji vekunze neveAfghan avo vakapotsa kubuda.
Ariana Afghan Airlines akatangazve mabasa epamba musi waGunyana 3.
Iyo PIA jet yakadzokera kuIslamabad nguva pfupi vachangomhara muKabul neMuvhuro.
Vanenge vanhu makumi manomwe vaive vari nendege kuenda kuguta guru rePakistani, vazhinji veAfghan vaive hama dzevashandi nemasangano epasi rese, sekureva kwevashandi vepasi peairport.